Talooyin Ka Caawinaya Inaad Ka Hor Tagto Laba-Labada - iftineducation.com
iftineducation.com – Badanaa haweynka uurka leh waxay la dhibtoodaan laba-labo subaxdii hore gaar ahaan markay ku jiraan sadaxda bil ee ugu horeysa ee uurka, sida ay qabaan cilmi baara yaasha, waxaa jiraan wax yaabo badan oo keena laba-labada subaxdii hore. Iyadoo aysan jirin wax daawo ah arintaas, laakiin waxaa jira wadooyin qaar oo looga hortagi karo, sidaa darteed wax nagala baro wadooyinkaas.
Qaado hurdo yar maalintii ama markaad dareento laba-labada.
Ha cunin raashiin farabadan halka mar, waa in aad qaadataa raashiin fud fudud oo is daba joog ah lehna borotin sidoo kale waa inaad ka fogaataa raashinka leh dufinta.
Qaado raashin fud fudud hadii aad joogta goobto shaqada ama aad aadeyso goob ganacsi, kuna qaado bac qudaarta qaleelka ah iyo buskut, maxaa yeelay hadii aadan cunin in mudo ah raashin waxaa suura gal ah in ay yaraado nisbada sokorta ee dhiiga taasoo sababi karta laba labada.
Qaleelka waa sababta ugu wayn ee keenta laba labada ,sidaa darteed waa in aad qaadataa xoogaa biyo ah daqiiqado ka dib maalinkii oo dhan.
Hadii aad dareento laba labo ama mantag jab saabuun ah carafso waxay kaa yareeneysaa waxii aad dareemeysay, waxaa kaloo muhiim ah galab kasta in aad u baxdo banaanka si aad u soo qaadato hawo macaan ama suubi xoogaa yar oo jimicsi ah.
Dowladda Marocco oo Qeexday Sababaha ay u Diideen in ay Marti Galiyaan Koobka Africa .